Galmudug oo joojisay dhisidda Golayaasha Degaanka | KEYDMEDIA ONLINE
Galmudug oo joojisay dhisidda Golayaasha Degaanka
Maamulka Galmudug ayaa joojiyay guud ahaan dhoorashooyinkii degaanka ka socday, kadib markii la galay doorashada Dowladda Fadaraalka Soomaaliya.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Sida uu sheegay Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Maamulka Galmudug, Axmed Shire Falagle, Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ‘Qoorqoor’ ayaa amar ku bixiyay in la hakiyo dhismaha Golaha Deegaanka Degmada Balanbal ee Gobalka Galgaduud, kadib markii mid ka mid ah beelaha dega degmada ay qaadacday gole degaan oo dhawaan ay yabyabtay Wasaaradda arrimaha gudaha maamulka.
“Waxaa socday dhaq-dhaqaaaqyo lagu dhisayay dowladda hoose oo ka jiray degmoomin badan, sidaas daraaddeed labo doorasho iskuma dul qaban karno, midda qaranka ayaa hoosta naga soo gashay ayay Dowladdu go’aamisay in la hor mariyo, muddo 90 cisho gudohood ah waxaa la joojiyay dhamaan dhaq-dhaqaaqyadii doorasho ee laga waday degooyinka GM, sida Dhuusamareeb, Cadaado, Caabudwaaq, Ballanbal, iyo Hobyo”. Ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Falagle.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, ayaa Madaxweynaha GM Qoorqoor, uga mahad-celiyay, “amarka uu bixiyay ee lagu joojinayo dhaqdhaqaaqyada aan waafaqsanayn hanaanka dhismaha goleyaasha deegaanka degmooyinka Galmudug ee maalmahaan ka socday degmooyinka Galmudug qaar kamid ah, gaar ahaan Degmada Balanbale.”.
Dhanka kale, waraka ka imaanaya Balanbal ayaa sheegaya in maanta la dhaariyay xubnihii Golaha Degaanka ee muranku ka taagnaa, kaas oo ay dhidibada u taagtay Wasaaradda Arrimha Gudaha Galmudug.